दिल्लीमै बनेको थियो वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने ‘डिजाइन’, यतिसम्म भयो – Medianp
दिल्लीमै बनेको थियो वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने ‘डिजाइन’, यतिसम्म भयो
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २४, २०७५१४:१८0
काठमाडौं, २४ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतमलाई संसदमा ल्याउन काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले एकाएक राजीनामा दिएपछि यसले नेपालको राजनीति फेरि एकपटक तरंगित बनाएको छ । तर, मानन्धरको राजीनामा प्रकरण एकाएक आएको भने होइन, यसका लागि साउनदेखि नै खिचडी पाकेको तथ्य खुलेको छ ।
नेकपाका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बुधबार बिहान फेसबुकमा राखेको एउटा स्टाटसले धेरै कुरा खोतलेको छ । पोखरेलले नामै नलिई पूर्वमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका छन् । वामदेवलाई संसदमा ल्याउन प्रचण्डले भारतको पाँच दिने भ्रमण गरेको र त्यहीँ सबै योजना बनेको नेकपा नेताहरूको आशंका छ ।
पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा त्यो पनि संकेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण गर्ने’ नाममा वा ‘क्रान्तिकारी नेतृत्वको रक्षा गर्ने’ नाममा विदेशी भूमिमा आश्रित रहेनौं, रहन चाहेनौं । देशमा ‘क्रान्तिकारी परिवर्तन’ गर्ने नाममा विदेशी शक्तिसित कुनै गोप्य साँठगाँठ पनि गरेनौं । हामी आफ्नै देशका आधारभूत जनतामा भर परेर टिक्न चाह्यौं, बाँच्न चाह्यौं !’
स्रोतका अनुसार तीन दिनअघि सोमबारदेखि नै साउथ ब्लकबाट नेपालका केही पत्रकार र नेकपाका नेता कार्यकर्ताको मोबाइलमा घन्टी बज्न थाल्यो । ‘उनीहरूले वामदेव गौतमलाई संसदमा ल्याउन रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिँदैछन् रे नि हो’ भनेर सोध्न थाले । विस्तार त्यो हल्ला सबैतिर फैलियो । त्यसैदिन नेकपाको सचिवालय बैठक थियो । बैठकमा प्रचण्डले ‘कमरेड वामदेव गौतमका लागि सांसद रामवीर मानन्धरले पदबाट राजीनामा दिन तयार हुनुभएको छ’ भनेर प्रस्ताव राखेपछि मात्र यसको रहस्य खुलेको हो ।
प्रचण्डको दिल्ली, चीन र सिंगापुर भ्रमण त्यही प्रयोजनका लागि भएको नेकपा नेताहरू बताउन थालेका छन् । विगतमा खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने बेला नयाँ दिल्लीमा आठ महिना ‘होमवर्क’ भएको बताइन्छ । त्यसबेला संसारका कुन कुन देशमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो भनेर अध्ययन गरिएको थियो । त्यसपछि बाबुरामको सरकार विस्थापित गरी रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सोही निर्वाचनपछि मात्र नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो ।
डोल्पाका सांसद धनबहादुर बूढाले पदबाट राजीनामा नदिने बताएपछि प्रचण्ड दिल्ली गएको र सबै वातावरण बनाएको स्रोतले बताएको छ ।
के तपाई डीभी भर्दै हुनुहुन्छ ? डिभी भर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ !
गर्भमा हुर्कदै गरेको बच्चासँगै हुर्किदै थियो यस्तो खतरनाक चिज ! जुन थाहा पाएपछि चिकित्सक नै भए बेहोस !